Nyanzvi Dzozeya Zvipingaidzo paKutorwa kweNhau
Kunyange hazvo mapato matatu ari hurumende yemubatanidzwa akatenderana kuvandudza mitemo ine chekuita nezvematongerwo enyika pasi pechibvumirano cheGlobal Political Agreement, hurongwa uhu pari zvino hunongova zviroto.
Sangano reHuman Rights Watch rakaburitsawo gwaro svondo rino riri kuratidza kuti Zanu-PF ichiri kuramba ichishandisa mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende kunyomba vanopikisa bato iri. Hurumende inotiwo kutanga musi wa 1 Chivabvu inenge yava neterevhizheni yechipiri inonzi Channel Two, iyo ichibata nzvimbo dzakaita seChitungwiza, Marondera, Norton, Murehwa, Bindura, Banket, Murombedzi, Beatrice neFurtherstone.
Zanu-PF yakaparurawo mapepa matsva anopihwa pachena kumaruwa anonzi The Insider, neThe Zimbabwe Today. Asi vamwe vari kuda kutanga mapepa akaita seDaily News neNewsday, havasi kupihwa mukana vachinzi mutemo hausati wanyatsokwenenzverwa.
GPA inotiwo vari kutepfenyura vari kunze kwenyika vakaita seStudio 7 neSW Radio Africa vanofanirwa kudzoka kumusha voita nhepfenyuro dzinoshanda dziri muZimbabwe. GPA inokurudzirawo dzihurumende dziri kubatsira nhepfenyuro idzi kuti dzimise kupa rubatsiro kunhepfenyuro idzi.
Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoodza moyo. Mashoko aya tsinhirwawo naVaDewa Mavhinga, chipangamazano chesangano reHuman Rights Watch, avo vanoti Zanu-PF ndiyo iri kuita kuti pashaye chiri kubuda pakuvandudza mitemo yezvekutepfenyurwa kwenhau.
Hurukuro naVaDewa Mavhinga naVaFoster Dongozi